all sources - Doh Phandee
Phandeeyar launched the first round of challenges on the Doh Phandee Open Innovation Platform on 17th May 2020. 400+ Innovators, Makers, Designers, Hackers and Data Scientists from tech industry in Myanmar signed up for the challenges on Doh Phandee and6teams for the Back to Business (MSMEs),6teams for the Essential Supplies for Organizations and7teams for the Food Security participating in the challenges on Doh Phandee and it is expected to produce prototypes in the next two to four weeks.
Once the winning solutions are selected, Phandeeyar facilitates the deployment and integration to become scale-able solutions.
We will be announcing exciting challenges on the platform and you may register to participate here.
oh Phandee - ဒို့ဖန်တီး ဟု အမည်ပေးထားသော Open Innovation Platform သည် နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အကူအညီယူ၍ Covid - 19 အပြင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ မှ ကြုံတွေ့နေရသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ လိုအပ်သည့် အခြားသော စိန်ခေါ်မှု များကို အတူတကွ ကျော်လွှားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပရောဂျက် ဖြစ်သည်။
Phandeeyar ရဲ့ ဒို့ဖန်တီး - Open Innovation Platform ပေါ်မှ ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲ ၃ ခုကို မေလ ၁၇ ရက် ၂၀၂၀ တွင် စတင်ကျင်းပလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း နည်းပညာနယ်ပယ်အသီးသီးက ပညာရှင်‌ Innovater များ၊ Maker များ၊ Designer များ၊ Hacker များနဲ့ Data Scientist အယောက် ၄၀၀ ကျော်ကပါဝင်ဖို့အတွက် စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ကြပြီး ယခုဆိုရင် ဒို့ဖန်တီးပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Back to Business (MSMEs)အတွက် အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့၊ Essential Supplies for Organizations အတွက် အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ နဲ့ Food Security (စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှု) အတွက် အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ တို့ကပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်နေကြပြီး နောက် ၂ ပါတ်ကနေ ၄ ပါတ်အတွင်းမှာ ပုံကြမ်းထွက်ရှိလာဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အနိုင်ရ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအား ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ၎င်း နည်းပညာတီထွင်မှုကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်စေရန် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် ဖန်တီးရာမှ ပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်သည်။
မကြာမီတွင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အခြားစိတ်ခေါ်မှုများကို ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲက ဘယ်အချိန်စပြီး ဘယ်မှာစာရင်းသွင်းရမလဲ။
ဒီပြိုင်ပွဲကို ဂျာမနီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (GIZ) မှအကောင်အထည်ဖော် တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မေလ ၁၄ရက် ၃ နာရီအချိန်မှာ Online Webinar ကနေတစ်ဆင့် အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမှာမို့ ဒီမှာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲ၀င်ဖို့အတွက် ဒို့ဖန်တီးမှာပထမဆုံးစာရင်းသွင်းဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ပြိုင်ပွဲ၀င်ပြိုင်ဖို့အတွက် ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်။ ပြိုင်ပွဲက မေလ ၁၇ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမှာပါ။
When does the challenge start and where can I register?
This challenge is brought to you by GIZ and we will have an online webinar on 14th May at 3PM to explain in detail about the challenge. You can register to attend for free here.
To compete in the challenge, you first need to register on the Doh Phandee platform. We will contact you to participate in the challenge. It starts on 17th May 2020.
ဒို့ဖန်တီး platform မှာ ရွေးချယ်တင်ပြသွားမယ့် ပြိုင်ပွဲ ၄ ခုရဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြဖို့ မေလ ၁၄ ရက်နေ့ ၃ နာရီ မှာ Webinar ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မှာပါ။ ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ နည်းပညာစွမ်းရည်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Online Webinar ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ ဖုန်းနဲ့ ပါ၀င်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပွဲကို အခမဲ့ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ ဒီနေရာကနေ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
We've got challenges for you
InnoCentive isapioneer in Crowdsourced Innovation and has the track record to prove it, with nearly 2,500 Challenges conducted, over 170,000 solutions proposed, and over $25,000,000.